Emelitere ekwentị Razer na ọnọdụ eserese ọhụrụ Gam akporosis
Razer malitere ọdụm mbụ ya n'ahịa na njedebe nke afọ gara aga, ọnụahịa nwere ụfọdụ akụkụ iji melite. Onye dọtara ọtụtụ ndị bụ igwefoto, otu n'ime ndị ọrụ niile na-eji. Companylọ ọrụ ahụ kwenyesiri ike na ọ ga-ebupụta mmelite dị iche iche iji dozie ihe ọ bụla na-adịghị mma nke njedebe ahụ.
N'agbanyeghị na e kpughere ya na November 2017, ọnụahịa a erughị ahịa na gam akporo 8, nke mere ka ndị ọrụ nwee ọtụtụ ọnwa, ruo etiti Eprel 2018, inwe ike ịnụ ụtọ ozi niile bịakwutere anyị site n'aka gam akporo Oreo. Ihe kpatara igbu oge bụ na ụlọ ọrụ chọrọ ozugbo hapụ mmelite na gam akporo 8.1, na-ahapụ ụdị nke mbụ.
N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, a manyere ya lelee mmelite maka ụbọchị ole na ole, dị ka mere ka ọ fọrọ nke nta niile Nsukka na gam akporo Oreo, n'ihi na nsogbu nke ụfọdụ ọnụ gosipụtara na SIM Nke ngwaọrụ. Mgbe edozi nsogbu ahụ, ụlọ ọrụ ahụ malitere mmelite ahụ wee rụọ ọrụ na-agbakwunye nkwalite na atụmatụ ọhụrụ.
The ịgba chaa chaa ngwa emeputa ka wepụtara ọhụrụ update, mmelite na-elekwasị anya na-agbakwunye a ọnọdụ eserese emelitere, nke, dị ka onye na-emepụta ya si kwuo, anyị ga-enwe ike inweta ọtụtụ n'ime kamera azụ abụọ dị na azụ nke ngwaọrụ ahụ.
Mana ọ bụghị naanị ihe ọhụụ, ebe ọ bụ na onye mepụtara ejirila ohere iji melite usoro ojiji n'ihi mgbanwe nke usoro nzuzo na-emetụta na May 24. Ọzọkwa, mmelite a gụnyere nche patch maka ọnwa nke Mee na arụmọrụ nke ọnụ ọgụgụ ahụ ka mma site na idozi ahụhụ ndị ahụ achọpụtara kemgbe mmalite nke mmelite ikpeazụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Emelitere ekwentị Razer na ọnọdụ eserese ọhụrụ